MW Xasan Sheekh oo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii aan la garawsan rabitaanka shacabka - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka MW Xasan Sheekh oo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii...
MW Xasan Sheekh oo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii aan la garawsan rabitaanka shacabka
Madaxweynihii hore ee JFS Xasan Sheekh Maxamuud aya bartiisa twitterka soo dhigay farriin adag oo ku socota madaxda Jamhuuriyadda Federaalka ah.
Fartiinta madaxweynaha oo xambaarsan farriin adag ayuu ku sheegay in “Taariikhda waxay na bareysaa in xasilooni siyaasadeed sal u tahay in la is dhegeysto. Haddii kuwa hogaaminaya dalkeena ay diidaan inay dhagaystaan oo aayna aqbalaan codadka ka dhasha ficiladooda sida ugu dhaqsiyaha badan, waxay la tacaali doonaan codadka aan macquulka ahayn ee ka dhasha rabshadaha.”
Waayo codka shacabka haddii la maqli waayo lana tixgelin waayo rabitaankooda, waxaa hubaal ah in shacabka ay kal falcelin doonaan, sida dibad baxyo rabshada wato iyo kacdoon shacab.
Hadalka MW Xasan Sheekh ayaa ku soo aadaya maalin kaddib markii uu MW Farmaajo siiyay wareysi dhinacyo badan Telefishinka Universal taasoo lagu weydiiyay su’aalo dhowr ah oo la xiriira arrimaha amniga, doorashooyinka, ciidamada la geeyay gedo, doorashadii galmudug iyo xiriirka Kenya.
MW Farmaajo oo mar wax laga weydiiyay in uu musharax yahay ayuu ku jawaabay hadalo la yaab ku noqday shacabka Soomaaliyeed taasoo la hadal hayo tan iyo xalay. Jawaabta MW Farmaajo “Doorashadii 2016 ma ahayn mid sharci ah oo waafaqsan dastuurka, mana ogolaaneyno in la qabto doorasho noocaas oo kale ah” MW Farmaajo doorashadaas isaga lagu soo doortay balse fasiraad badan oo laga bixiyay jawaabtaas aya in uu Farmaajo marnaba diyaar u ahayn in uu kursiga banneeyo iskaba daa in uu doorasho qabto.
Siyaasiin badan aya ka falceliyay jawaabta Farmaajo waxaana dad badani is weydiinayaan sababta ku qasbi karta MW Farmaajo in uu sharci darro ku maneeyo doorasho dastuuri ah oo isaga lagu soo doorto
Mudada uga hartay in uu sii hayo xilka Madaxweynaha Maxamed Farmaajo
Previous articleKhilaaf ka dhashay isku shaandheynta golaha Wasiirada & Fahad oo diiday in la bedelo Cawad
Next articleWaraysigii Farmaajo oo god ku riday rajadii Kheyre, talana farahiisa laga bixiyay